आज दस जना मन्त्री फेरिने, को को आउँदै ? को को जाँदै ? – Hamrai Sajha Patrika
आज दस जना मन्त्री फेरिने, को को आउँदै ? को को जाँदै ?
By संवाददाता	 Last updated Nov 20, 2019
काठमाडौ, ४ मङ्सिर
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा चलेको केही दिन भयो। यही कारण सरकारी कामसमेत प्रभावित भएपछि मन्त्रीहरूले नै मंगलबार मुख खोलेर सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यथार्थ के हो ? ’
‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको धेरै पहिलेदेखि चर्चा भएको छ। यस विषयमा मैले पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि भनेकै छु। सामान्य हेरफेर हुन्छ। हेरफेर भन्नेबित्तिकै सबै पर्ने कुरा आएन। कतिपय नयाँ साथीलाई अवसर दिन पनि यस्तो गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेको उधृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘कोही दोहोरिनुहोला, कोही बाहिरिनुहोला, अहिलेसम्म साथ दिनुभयो धन्यवाद। यसलाई अन्यथा नलिइदिनुहोला।’
त्यसअघि मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय के हो ? यो हुन्छ कि हुन्न ? हुन्छ भने गरिहाल्नुपरयो, हुँदैन भने पनि हुँदैन भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने भयो। बाहिर मान्छेहरूले मन्त्रीहरू आजका हुन् कि भोलिका भनेर प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। यसले राम्रो सन्देश गएको छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार दिनभर बालुवाटारमा आकांक्षी मन्त्रीहरूसँग एकल तथा सामूहिक भेटघाट गरेका थिए। ओलीले क्याबिनेट हेरफेर गर्दा दोहोरिने केही बहालवाला मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा समेत हेरफेर गर्न सक्ने स्रोतले बतायो।
आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार जिताउन नेपाली काङ्ग्रेस नेतृ आरजु राणा पुनर्वासमा
हुलाकी सडक प्रकरण: सिमामा पहरेदार भएर सडक निर्माण सम्पन्न गराउँछौ- पुर्व मन्त्री लाल बहादुर विश्वकर्मा २०७६, ४ मंसिर बुधबार ०८:५७
मातृभूमि रक्षाका लागि एकै दिन कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीका ‘चार बिओपी’ स्थापना । २०७६, ४ मंसिर बुधबार ०८:५७
नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोकियो २०७६, ४ मंसिर बुधबार ०८:५७
भारतको वकालत गर्ने सरिता गिरीको सांसद पद चैट । २०७६, ४ मंसिर बुधबार ०८:५७
रोकिएन भारतको दादागिरी: हातहतियार सहित नेपाल प्रवेश गरेर हुलाकी रोड निर्माणमा अवरोध । २०७६, ४ मंसिर बुधबार ०८:५७